Root khudaarta | November 2019
Jerusalem artichoke waa warshad dilka ah, aad u la mid ah baradho si fiican loo yaqaan. Waxay ku noolaaneysaa si wanaagsan xaaladaha cimilada, ma aha mid picky ah oo ku saabsan daryeelka, siinayaa goosashada weyn. Jerusalem artichoke waxaa si weyn loo yaqaan ee kariska iyo daawada ay faa'iido, bogsiinaya guryaha. Maqaalkani, waxaad baran doontaa faa'iidooyinka dhirta, siduu Yeruusaalem ushaqaysto reproduce, iyo sidoo kale xeerarka aasaasiga ah ee beerto iyo daryeelidda farshaxanimada Yeruusaalem.
Waa maxay faa'iido u tahay cirridka cagaaran ee cagaaran
Margilan ama dabocase cagaaran waa khudradda dabiiciga ah ee khudradda cagaaran, oo ay ku dhaqmaan taranta dhulalka Uzbekistan. Waxay leedahay hannaan qani ah oo faa'iido leh, taas oo ka heshay dalabkeeda meelo badan oo nolosheena ah. Marka xigta, waxaan dib u eegi doonaa oo qiimeyn doonaa dhammaan meelihii ay ka faa'iideysan lahaayeen isticmaalkooda, isla markaana la wadaagaan macluumaadka xiisa leh iyo faa'iido leh ee ku saabsan khudraddaas aan faa'iido lahayn oo aad waxtar u leh, sida soo baxday.
Yacon: Codsiga qudaarta, beerashada iyo daryeelka
Barandhada, yaanyada, hadhuudhka, gabbaldayaha iyo dhaqamada kale ee ka yimid America, yacon ayaa noo keenay. Tani dhirta yar ee la yaqaan ee waddankeena waxay la mid tahay tayada ay ku leedahay artichoke Yeruusaalem, kaas oo la koray muddo dheer waana mid aad u yaqaan beeraleyda dad badan. Aynu si fiican u baraarno warshad dhaqameed, annaga nagu filan.